Fandrobana administratera sivily : Lehilahy iray karohina fatratra -
AccueilSongandinaFandrobana administratera sivily : Lehilahy iray karohina fatratra
16/05/2018 admintriatra Songandina 0
Natolotra ny Fampanoavana omaly ilay fandratrana niharo fandrobana nahazo ilay administratera sivily sy ny vadiny teny Arivonimamo ny alahady 29 Aprily lasa teo. Naverin’ny Fampanoavana any amin’ny mpitandro filaminana ny raharaha satria tsy nipoitra ary tsy hita mihitsy ilay lehilahy faha-dimy, nandeha tamin’ilay fiara Peugeot Partner. Marihina moa fa voaroba nandritra io herisetra io ny fakan-tsary sy ny vangovango teny an-tanan’ny vadin’ity administratera sivily ity. Karohina mafy tokoa araka izany ilay lehilahy faha-dimy nandray anjara tamin’izao vono sy ratra niniana natao niharo halatra sy fanendahana izao.
Raha tsiahivina kely ny raharaha, dia niharan’ny herisetra sy fanendahana ireto mpivady ireto. Nobahanan’ireo dimy lahy nitondra ilay fiara Peugeot Partner ny arabe. Nivoaka nikasa hanontany ny anton’izao fibahanan-dalana izao ilay administratera, saingy “coup de tête” indroa avy hatrany no nahazo azy ka vaky tamin’izany ny tatamasony roa. Nitambaran’ireo lehilahy novonoina ilay adiministratera, ilay faha-dimy kosa avy hatrany dia nandroba ny fakan-tsary sy ny vangovango teny an-tanan’ny vadiny izay nijanona tao anaty fiarakodia BMW. Nametraka fitoriana izy ireo taorian’ny fitsaboan-tena teny amin’ny HJRA, ka dia iny natolotra teny anivon’ny Fampanoavana ny alatsinainy lasa teo iny, dia izao naverina eny amin’ny mpitandro filaminana izao.